ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » ခွေးများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်စေခြင်း: သင်၏ Pup သင့် Soulmate မှသင် Lead တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်
အားဖြင့် Karla M က. Socci Somers
ခွေးများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်စေခြင်း: သင်၏ Pup သင့် Soulmate မှသင် Lead တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဇန်နဝါရီ. 22 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
သင်အနည်းဆုံးကမျှော်လင့်တဲ့အခါများသောအားဖြင့်ဘာဖြစ်လာ, ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုသင့်အသက်တာ၏မေတ္တာကိုရှာတွေ့မှကြွလာသောအခါတစ်ခုကြိုးစားအားထုတ်ဖို့နှိပ်စက်တာဘယ်တော့မှမ. ဟုတ်ပါတယ်, သင်အိမ်ရှေ့တံခါးမှာတက်ပြသရန်သင့်အိပ်မက်တွေကို၏ယောက်ျားမိန်းမအဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေထိုအရပ်၌ငါထိုင်နိုင်, သို့မဟုတ်သင် leash ခြင်းအားဖြင့်ခွေးကို ယူ. ထွက်ရနိုင်. သင်ပိုမိုမြန်ဆန်သင့် soulmate ရန်သင့်အားဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်မည့်လမ်းကြောင်းသည်ထင်သလဲ?
သင်အကြိုက်ဆုံးခွေးတစ်ကောင်ကိုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်စေခြင်းအသစ်ရဲ့မေတ္တာကိုသင်ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်. သင်တို့ကိုလမ်းလျှောက်သွားဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့ခွေးကိုနှင့်အတူအပြေးကြသောအခါအစဉ်အဆက်ကသတိထားမိမှာ, လူများကသင့်ကိုရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ပြော, "သူကဒါမယ့် [ချစ်စရာ, ကြီးမားသော, fluffy, ဖော်ရွေမှု, ချိုသော, goofy] တပါးအမျိုးသားရုတ်တရက်ဖက်ဖြစ်လာ? သင်တစ်ဦးခင်မင်ရင်းနှီးရှိသည်တဲ့အခါဒီအထူးသဖြင့်မှန်သည်, သင်တို့နှင့်အတူအထွက်သွားတဲ့ခွေးကို. သင်သည်သူသည်လမ်းတစ်လျှောက်နှင့် ပတ်သက်. စိတ်လှုပ်ရှားရလိမ့်မယ်အဘယ်သူကိုသိဘယ်တော့မှမ, သို့မဟုတ်သူထပြေး licking စတင်စေခြင်းငှါ, အဘယ်သူကို. ကအာရုံစိုက်. သင့်ရဲ့ခွေးကိုဇာတ်ကောင်စရိုက်မှာများစွာသောတရားသူကြီးဖြစ်. သူကအလားအလာမေတ္တာကိုအတိုးနှင့် ပတ်သက်. စိတ်လှုပ်ရှားင်ဆိုရင်, သင်ဖြစ်စေခြင်းငှါ,, လွန်း.
ခွေးထားရှိခြင်းသည်သင်တစ်ယောက်တည်းဘယ်တော့မှမဖြစ်ကြကိုဆိုလိုသည်. သင်ကိုယ်တိုင်ကအဖြစ်အပျက်နှင့် ပတ်သက်. တက်ရောက်အဆင်မပြေခံစားရလျှင်ကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်ကကိုသုံးပါ. လဟာပြင်ပွဲတော်ရန်သင့်ခွေးကိုရိုက်ယူခြင်း, ဥပမာအားဖြင့်, သင့်ရဲ့တကစစ်မှန်တဲ့မေတ္တာကိုတွေ့ဆုံသင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေတိုးပွါး - ဒါမှမဟုတ်အလွန်အနည်းဆုံး, ပျော်စရာကောင်းသည်ရုံသင်နှင့်တူခွေးဘူးချစ်သောသူနှင့်အတူထွက်ဆွဲထားဖို့တစ်စုံတစ်ယောက်. အများစုကပြင်ပအနုပညာသို့မဟုတ်ဂီတပွဲတော်များ, သင့်ဒေသခံပန်းခြံမှာသို့မဟုတ်ဖြစ်ရပ်များ, ကြိုဆိုပါတယ်အားလုံးကိုသင့်လေးခု-အတော်များများကမျက်စိမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ.
သင်သည်သင်၏ paramour ရန်သင့် pooch ခဲတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်နောက်ထပ်အိုင်ဒီယာ: အသစ်တစ်ခုကို route ကိုယူ. သင်များသောအားဖြင့်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရပ်ကွက်အတွင်းလှည့်ပတ်သွားလာလျှင်သူ့ကို, သို့မဟုတ်တူညီသောလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွင်, တစ်နေရာရာမှာကွဲပြားခြားနားသွား. သင်ကရှုခင်းအတွက်ယူနေစဉ်သင့်ခွေးကိုသစ်တစ်ခုပတ်ဝန်းကျင်ကိုရှာဖွေစူးစမ်းအပေါင်းတို့နှင့်တကွအသစ်အအနံ့ထွက် sniffing ချစ်လိမ့်မည် (I.E. လမ်းတစ်လျှောက်အခြားတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်). သင်တွေ့ဆုံရန်လူတိုင်းမှာပြုံးနေ, နှင့်သင့်ခွေးကိုသင်တို့အဘို့မိတ်ဆက်ကြစေ. ငရဲခန်းကြီးထဲမှာ, သင် Rover ကိုစိုးစံကိုယူပါစေသောအခါ (ဒါမှမဟုတ် leash), သူ့ရဲ့အိပ်မက်လူ့ငှါသင့်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်.